🥇 ▷ Rerito kale: suurtagalnimada Xiaomi Mi 9 Lite ayaa la sifeeyaa ✅
Rerito kale: suurtagalnimada Xiaomi Mi 9 Lite ayaa la sifeeyaa
Waa wax caadi ah, iyada oo loo marayo astaanta Xiaomi, in isla mobiil leh magac kale ayaa laga bilaabay Aasiya iyo Yurub. Dhawaan ayey ku dhacday Redmi K20 iyo Redmi K20 Pro, kuwaas oo yimid wadankeenna iyagoo magac leh Xiaomi Mi 9T iyo Xiaomi Mi 9T Pro. Hadda, mar labaad, kiis kale oo la mid ah ayaa soo muuqda: horay loogu dhawaaqay Xiaomi Mi 9CC. Mobilkan, waqtigiisii, waxaa la maleynayay in lagu bilaabi doono meel ka baxsan suuqa Aasiya iyadoo lagu bixinayo magaca Xiaomi Mi A3 Pro laakiin, aakhirka, midkoodna: Xiaomi Mi CC9 wuxuu noqon doonaa Xiaomi Mi 99 ee cusub . Ugudambeyntii, waxaa soo baxday in Xiaomi Mi 9SE uusan ahayn nooca nalka ee reerka Mi 9 isla markaana Xiaomi ay mar labaad na qabsatay.
Isdiiwaangalso si aad u hesho wararka teknolojiyadda ugu dambeeyay ee boostada boostada. Waxaan kuu soo diri doonaa hal emayl hal maalin ah oo ay ku jiraan soo koobitaanka cinwaannada wararka, khiyaanooyinka, isbarbardhiga, dib u eegista lagu daabacay mareegtadayada
Waxaan horeyba u ognahay Xiaomi Mi 9 Lite: waa Xiaomi Mi CC9
Xaqiiqdii, waxaan yeelan doonnaa nooc dhaqaale oo ah ‘Xiaomi Mi 9’ mana ahan qaabkii loo yaqaan ‘SE model’ laakiin wuxuu ahaa kii hore loo yaqaanay Xiaomi Mi CC9. Warkaan waxaa ku shubay shabakadaha bulshada mid ka mid ah tifaftiraha guud ee bogga horumarinta gaarka ah Soo saareyaasha Android XDA, Mishaal Rahman. Bogga ‘tweet’ sawir Google ah ayaa la isku xirey kaasoo liis gareynaya aaladaha xiga ee isku habboon ee Android. Waxaa dhexdeeda lagu arki karaa sida, runtii, Xiaomi Mi 9 Lite ay ku saabsan tahay dib-u-habeynta Xiaomi Mi CC9.
Xiaomi Mi 9 Lite kaliya wuxuu ka muuqday liiska Google ee aaladaha Android ee la xaqiijiyay. Waxaa ku taxan nambar-code pyxis waana noocyo kaladuwan oo ah Mi CC9.
– Mishaal Rahman (@MishaalRahman) Ogosto 31, 2019
Oo muxuu qeexnay waxaan ku helnay Xiaomi Mi CC9? Hagaag, aan si faahfaahsan u arag Hadana akhristaha wuxuu sawiri karaa gunaanadkiisa.
Xiaomi Mi CC9 waa moobilo dhex-dhexaad ah oo leh cabbir 156.8 x 74.5 x 8.7 milimitir ah iyo 179 garaam oo culeys ah. Shaashaddeeda Super Amoled waa 6.39 inji oo leh HD buuxa iyo + 443 pixels inji kasta. Waa guddi leh xayndaab hoose iyo xagal sare ah, oo leh cidhib-qaab u eg oo guryaha qolka hore ku jira.
Kamarad Saddex ah oo loogu talagalay dhexda
Isaga oo ka hadlaya qaybta sawirrada, qalabkani wuxuu leeyahay module saddex-geesood ah oo ku yaal dhabarka dambe oo ka kooban aaladda ugu weyn ee 48 megapixels iyo acalure f / 1.8, dareeme ballaaran oo xagal ballaadhan oo ah 8 megapixels iyo dareeme qoto dheer oo ah 2 megapixels. Kaamirooyinka hore waxaan leennahay lens 32 megapixels.
Gudaha waxaan ka helnaa processor Snapdragon 710 Waxaa laga dhisay 10 nanomitir oo ah sideed xirmooyin ah, oo leh ugu badnaan saacad xawaare ah oo ah 2.2 GHz oo ay weheliso laba nooc oo RAM ah oo ah 6 iyo 8 GB iyo laba kayd oo kale, 64 iyo 128 GB. Annagu garan mayno waxa isbeddelaya waa midka ku soo dhacaya bakhaarradeena.
Bateriga in kabadan 4,000 mAh iyo NFC
Marka laga hadlaayo tilmaanta inteeda kale, dareemayaasha faraha ayaa la rajeynayaa in lagu habeeyo shaashadda, batterigiisa wuxuu leeyahay awood 4,030 mAh oo leh awood degdeg ah oo 18W ah (lama oga haddii korontadu ku habboon tahay qalabka la imaan doono) iyo Android 9 ka hooseeya lakabka caadiga ah MIUI 10. Intaas waxaa sii dheer, waxaan ku kalsoonaan karnaa isku xirnaanta NFC ee bixinta mobilada, Raadiyaha FM, deked isgaarsiinta si loogu isticmaalo mobilada sida koontaroolka fog ee caalamiga ah iyo isku xirka USB Type-C. Lama oga qiimaha uu ku tagayo Yurub laakiin Ugudambeyn, Xiaomi Mi CC9 waxaa lagu iibsan karaa qiyaastii 250 euro dukaamada sida Aliexpress.
Warar kale oo ku saabsan… khadka dhexe, Xiaomi